यस कारण महिला ४० कटेपछि अफेयर राख्न चाहन्छन् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
चैत ३ गते, २०७५ - १३:४०
एजेन्सी ।भनिन्छ जीवनमा एकपटकमात्रै विवाह गरिन्छ । विवाह गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै बढी जोड दिइन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध हो जुन संसारका हर कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ ।
चैत ३ गते, २०७५ - १३:४० मा प्रकाशित
महिलाले कहिले नभन्ने सेक्स समस्या !
यी राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन अत्यन्तै फलदायी हुने, हेर्नुहाेस् तपाइकाे राशिफल
साँचो बोल्दा आयुसमेत बढ्छ, अरु फाईदा यस्ता छन्
साँझपख रुँदाकाे फाइदा यस्तो छ, एक अध्ययन
यसकारण बढ्दैछ सम्बन्धविच्छेदको घटना, हरेक एक सेकेन्डमा एउटा सम्बन्धविच्छेद !
याैन सम्पर्कको क्रममा भुलेर पनि नगुर्नहोस् यी ८ गल्तीहरु
जान्नुहोस्, यसकारण झगडा पनि फाइदाजनक छ
तौल कम गर्न राती भोकै त सुत्नुहुन्न ? थाहा पाउनुहोस् के हुन्छ ?
पुरुषका लागि मात्र एक रात काफी ! कारण यस्ताे छ
तपाईंको आजको दिन कस्तो होला ? यस्तो भन्छ राशिफल